bollywood | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 87
Home >> bollywood (page 87)
खुल्यो रहस्य । सलमानको सिक्स प्याक नक्कली ?
हालै मात्र एउटा यस्तो भिडियो सार्वजनिक भयो जसकारण उनका करोडौ फ्यानहरु निराश हुन सक्छ । उक्त भिडियोका अनुसार बलिउड स्टार सलमान खानको पर्दामा देखिने लोभलाग्दा सिक्स प्याक प्राकृतिक होइनन । उनको सिक्स प्याक भिजुअल इफेक्टको माध्यमबाट देखाइने बताइएको छ ।
बताइएअनुसार हाल इन्टरनेटमा भाइरल बनेको उक्त भिडियो भिजुअल इफेक्ट तयार गर्ने कम्पनीबाट लीक भएको हो । एक पत्रिकाका अनुसार उक्त भिडियो कंपनीको एक कर्मचारीले सार्वजनिक गरिदिएका हुन जसलाई हालै मात्र कंपनीले निकालेको थियो ।
उक्त कंपनीले सलमान खानको सुपरहिट फिल्म एक था टाइगरको शर्टलेस सीन मा इफेक्ट दिएका थिए । भिडियोमा सलमानको पेट स्पष्ट देखिएको छ, उनले सिक्स प्याक कसरी तयार गरिन्छ सबै दृश्यहरु भिडियोमा देखाइएको छ ।
‘विग बोस’को घरभित्र बाथरुममा गरिन्छ सेक्स ।
चर्चित टि भी रियालिटि शो ‘बिग बोस’को सिजन ८ सुरु भइसकेको छ । बलिउड स्टार सलमान खान ‘बिग बोस ८’ लाई सञ्चालन गर्दैछन । शोमा विभिन्न बलिउड सेलेब्रेटी हरु प्रतियोगिको रुपमा ‘बिग बोस’ को घरभित्र प्रवेश गरिसकेका छन । ती प्रतियोगिहरु करिब तीन महिनासम्म एउटै घरमा रहनुपर्दछ । जसबाट केहि प्रतियोगिहरु अत्यन्त घनिष्ट बन्छन भने केहि प्रतियोगीहरु झगडा गर्दै दुश्मनी मोल्छन । यसरी बिग बोस घरभित्र रहदा उनीहरु बाहिरी बातवरणबाट पुर्ण रुपमा टाढिनुपर्दछ भने कयौ भौतिक सुखको पनि अनुभव गर्न पाइदैन । तर हालै विगबोसका अघिल्ला सिजनमा भाग लिइसकेका केहि प्रतियोगिहरुले एक सनसनीपुर्ण खुलासा गरेका छन । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनीहरुले ‘बिग बोस’ घरको बाथरुम भित्र सेक्स गर्ने गरेको बताएका छन । हरेक समय हरेक कुना क्यामेराको निगरानीमा रहने घरमा बाथरुममा भने क्यामेरा राखिएको हुदैन । त्यहि गोप्य स्थानको फाइदा प्रतियोगिहरुले उठाउने गरेको उनीहरुको खुलासा छ ।
त्यस्तै उनीहरुले प्रतियोगीहरुले जुसको बोतलमा रक्सी प्रयोग गर्ने गरेको पनि खुलासा गरेका छन ।
बिग बोस सिजन ८ मा भने प्रतियोगिहरुले तीन महिना हवाइजहाजमा बिताउनेछन । उनीहरुले जहाजको सीटमै सुत्ने छन । बिगबोस सिजन ८ लाई हालसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
१२ बर्षपछि शाहरुख र एैश्वर्या एकसाथ ।
यदि सबै कुरा ठीकठाक भएमा शाहरुख खान र ऐश्वर्या रायको जोडी एकपटक फेरी एकसाथ देखिने भएका छन । उनीहरु १२ बर्षपछि एकसाथ फिल्ममा देखिन लागेका हुन । यसअघि अन्तिमपटक यो जोडीलाई सञ्जयलिला भंसालीको फिल्म ‘देवदास’मा देखिएको थियो । बताइएअनुसार रोहित शेट्टीले शाहरुख खानलाई लिएर नयाँ फिल्म बनाउदैछन, जसको लीड हिरोइनको लागी उनले ऐश्वर्या रायलाई अफर गरेका छन । यसबारेमा ऐश्वर्याबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यदि ऐश्वर्याले अफर स्वीकारेको खण्डमा एक जामानाको सुपरहिट जोडीले पुन पर्दामा रोमान्स गर्नेछन ।
स्मरण रहोस शाहरुख र ऐश्वर्या पहिलोपटक फिल्म ‘जोश’मा सँगै देखिएका थिए । त्यसयता मोहब्बते, शक्ति, इश्क कमीना लगायत फिल्ममा यो जोडी जमेका थिए ।
ऐश्वर्या विवाहसँगै करिब ४ बर्षपछि फिल्ममा फर्किएकि हुन । उनी इरफान खानसँग फिल्म ‘जज्बा’बाट बलिउडमा कम ब्याक गर्दैछिन ।
प्रियंकालाई निर्देशकले अन्डरवेयर देखाउन भनेपछि ।
बलिउड नायिका हरु पटकपटक मिडियामा गसिप बनेर आउछन । हालै मात्र दिपिका पादुकोण को क्लीवेज देखिएको बारे चर्चा सेलाउन नपाउदै अर्कि नायिका प्रियंका चोपडाबो रोचक खबर आएको छ । प्रियंकाले हालै एक म्यागजिनको सम्पादकसँग ट्वीटरबाटै अन्तरवार्ता दिइन । अन्तरवार्ताको क्रममा सम्पादकले उनलाई कुनै निर्माता या निर्देशकले तपाइलाई कुनै अचम्मको कुरा गरेका छन ? भन्दै प्रश्न राखेपछि उनी खुलिन । प्रियंकाले भनिन सबैभन्दा अचम्म त्यो थियो, जब एक निर्देशकले दर्शकलाई फिल्म देखाउन एक गीतमा मेरो अन्डरवेयर देखाउने कुरा गरे । त्यसपछि मैले फिल्म नै छोडिदिए ।
‘﻿नो सेक्स प्लीज’ बाट डेब्यु गर्दैछिन दिशा पाटनी ।
बलिउडका सफल फिल्ममेकर करण जोहर बलिउडमा नयाँ स्टार भित्र्याउने निर्देशकको रुपमा चिनिन्छ । उनको एउटै फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’बाट डेब्यु गरेका बरुण धवन, आलिया भट्ट र सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल बलिउडको जल्दाबल्दा स्टार भइसकेका छन । यसरी नयाँ स्टारलाई डेब्यु गराउने करणको नयाँ फिल्मबाट पुन नयाँ आशालाग्दो नायिका डेब्यु हुदैछिन । करणको नयाँ फिल्मको नाम ‘नो सेक्स प्लीज वी आर इन्डियन’ राखिएको छ । फिल्मको लागी सम्पुर्ण तयारी भइसकेको छ । फिल्मको कलाकार प्राविधिकहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । तर नायिका भने पक्का भइसकेको छ । उनी हुन दिशा पटेल । दिशा फिल्मको लीड हिरोइन रहनेछिन । मोडलिंगमा नाम कमाइसकेकी १९ बर्षीय दिशा बिद्यार्थी हुन । उनी २०१३ मा फेमिना मिस इंडिया मा फस्ट रनरअप बनेकी थिइन । त्यस्तै उनी फ्रेश हंट २०१२ को विजेतासमेत भइसकेकी छिन । उनले कयौ विज्ञापन गरिसकेकी छिन ।
नो सेक्स प्लीज वी आर इंडियन लाई करणसँगै एकता कपुरले पनि निर्देशन गर्नेछिन ।
आमिरको ‘पीके’लाई रिलिजपुर्व नै ८५ करोड ।
बलिउड पर्फेक्टनिष्ट आमिर खान अभिनित नयाँ फिल्म ‘पीके’ रिलिज हुनुअघि नै महंगो मुल्यमा बिक्रि भएको छ । बताइएअनुसार फिल्मको स्याटेलाइट अधिकार करिब ८५ करोड भारुमा बिक्रि भएको छ । जानकारीअनुसार यो डील बलिउडकै हालसम्मको सबैभन्दा महंगो डील हो । अर्थात रिलिज अघि नै यति मोटो रकम बलिउड इतिहासमै ‘पीके’ले पहिलोपटक पाएका हुन । यसअघि शाहरुख खानको फिल्म ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ले स्याटेलाइट अधिकार बिक्रि गरेबापात ६५ लाख प्राप्त गरेको थियो ।
यति महंगो डील भएसँगै फिल्मका निर्माताले फिल्मले ३०० करोड कलेक्सन सजिलै गर्ने दाबी गरेका छन । यदि साँच्चै यस्तो भएको खण्डमा पीके बलिउड इतिहासमै सबैभन्दा बढि कमाउने फिल्म बन्नेछ ।
ऋतिकसँग डान्स गर्नु मेरो लागी च्यालेन्ज : कैटरिना कैफ ।
बलिउड सुपरहिरो ऋतिक रोशनलाई एक उत्कृष्ट डान्सरको रुपमा पनि चिनिन्छ । बलिउडमा ऋतिकको जस्तो आकर्षक डान्स जादु अन्य स्टारले देखाउन सकेका छैनन । पछिल्लो समय फिल्म ‘बैंग बैंग’मा सँगै काम गरेकी नायिका कैटरिना कैफले ऋतिकसँग डान्स गर्नु आफ्नो लागी च्यालेन्ज भएको बताएकी छिन । ३१ बर्षीय यी अभिनेत्रीले हालै फिल्मको म्युजिक लन्च समारोहमा यस्तो बताएकी हुन । फिल्मको टाइटल ट्र्याक लन्च गर्दै उनले भनिन ऋतिकसँग डान्स गर्नु मेरो लागी सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज थियो । उनको लचकतापनको जवाफ छैन । उनको डान्सको लेभल पुरै अलग छ , उनको डान्सको एनर्जीसँग म्याच हुनका लागी तपाईलाई उत्कृष्ट हुन जरुरी छ, जब उनी डान्स गर्छन उनमा आफसे आफ नेचुरल शक्ति आउछ ।
फिल्मको टाइटल ट्र्याकमा कसले उत्कृष्ट डान्स गरेको छ भन्ने जिज्ञासामा उनी बोलिन जब मैले एक्लै रिहर्सल गरीरहेकी थिंए, तब म राम्रो गरिरहेकी थिए, तर फाइनल शुटमा जब ऋतिक आए त्यसपछि कसले राम्रो गर्यो सबैलाई थाहा छ ।
ऋतिक ‘बैंग बैंग’लाई आफ्नो बेस्ट फिल्ममध्यको एक मानिरहेका छन । यो फिल्म हलिउड स्टार टाम क्रुजको फिल्म ‘नाइट एण्ड डे’ को रिमेक हो । फिल्म आउदो अक्टोबर २ मा रिलिज हुदैछ ।
﻿﻿हलिउड फिल्म भन्दा खतरानाक तमिल फिल्म बन्दै ।
दक्षिण भारतमा निर्माण हुने फिल्महरु प्राय बलिउड फिल्महरु भन्दा पनि अब्बल र आनन्ददायक हुने गर्दछ । तर हालै निर्माण भइरहेको एक तमिल फिल्मले भने बलिउड मात्र हैन हलिउडका सुपरहिट र खतरानाक मानिएका फिल्महरुलाई पनि टक्कर दिने देखिएको छ । हाल पोष्ट प्रोडक्सनमा रहेको उक्त फिल्मको नाम ‘आई’ हो । फिल्मलाई साउथका सुपरहिट निर्देशक शंकरले निर्देशन गरेका हुन । शंकरले साउथका सुपरहिट फिल्महरु एथिंरन(हिन्दीमा रोबोट), शिवाजी द बोस, नायक, इडिंयन, अपरिचित लगायतका कयौ फिल्महरु निर्देशन गरिसकेका छन । ‘आई’ फिल्मको काम पछिल्लो दुई बर्षदेखि चलिरहेको छ । हालै मात्र फिल्मको म्युजिक लन्च गरियो । म्युजिक लन्चमा भाग लिन हलिउड स्टार अर्नाल्ड चेन्नई आएका थिए । उनले पनि शंकरसँग काम गर्ने रहर प्रकट गरे ।
फिल्म आई मा तामिल सुपरस्टार बिक्रम मुख्य भुमिका मा छन । यसअघि बिक्रम र शंकरले अपरिचितमा पनि साथै काम गरेका थिए । बिक्रम बाहेक पनि ऐमी जैक्सन तथा उपेन पटेल पनि फिल्ममा छन । फिल्मको प्राविधिक पक्ष देखि स्टोरीले पनि हलिउड फिल्मलाई टक्कर दिने बुझिएको छ । फिल्ममा भिजुअल इफेक्ट अष्ट्रेलियाको चर्चित इफेक्ट कम्पनीले दिदैछन । जसले यसअघि हलिउड फिल्महरु हैरी पोर्टर, एवेजर्स, एक्स मैन सीरीज, लार्ड आफ द रिंग्स जस्ता फिल्ममा इफेक्ट दिइसकेका छन । फिल्ममा मेकअपको लागी पनि न्युजिल्याण्डको चर्चित कम्पनी वेटा वर्कशाप लाई जिम्मा दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि कयौ हलिउड फिल्मको लागी मेकअप गरिसकेका छन । उक्त कम्पनीकै मेकअपबाट बिक्रमको रुप माथीको तस्वीरमा देखिएजस्तो बनाइएको हो । फिल्म डरलाग्दो र रुचिपुर्ण कथामा बनेको बताइन्छ ।
जोन र श्रुतिको जोडीलाई इरोसले तिर्यो १०० करोड ।
सन २००७ मा रिलिज फिल्म ‘वेलकम’ को सिक्वेल फिल्म ‘वेलकम ब्याक’लाई वितरक कम्पनी इरोस इन्टरनेशनलले एक सय करोडमा खरिद गरेको छ । बुझिएअनुसार फिल्मका निर्माता फिरोज नाडियाडवालाले महंगो रकम मागेका कारण लामो समयदेखि फिल्म कसैले किनेका थिएनन । अन्तत इरोसले फिल्मको वितरण अधिकार किनेको हो । फिल्ममा जोन अब्राहाम र श्रुति हसनको जोडी देखिनेछ । यसअघि ‘वेलकम’मा भने अक्षयकुमार र कैटरिना कैफ देखिएका थिए । फिल्मका लागी अक्षयकुमारले समय नदिएपछि जोनलाई लिइएको हो । त्यस्तै ‘वेलकम’का अन्य कलाकार नाना पाटेकर, अनिल कपुर, परेश रावल लगायत भने ‘वेलकम ब्याक’ मा पनि दोहोरिनेछ । फिल्ममा नसिरुद्धिन शाह पनि थपिएका छन ।
यस फिल्मलाई जोनको करियरको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट मानिएको छ । हाल निर्माणको क्रममा रहेको फिल्म आउदो बर्षको जनवरी २३ मा रिलिज गरिनेछ । स्मरण रहोस उक्त मितिमा अक्षयकुमार अभिनित फिल्म बेबी पनि रिलिजको तयारीमा छ ।
ओ माइ गड ! अनुष्काले प्रियंकाको गला दबाएपछि ।
बलिउड सेलेब्रेटीहरु बेलाबेलामा विभिन्न कारण समाचार सामग्री बनिरहन्छन । पछिल्लो समय भने प्रियंका चोपडा र अनुष्का शर्मा झगडा गरिरहेको एक तस्वीरले बलिउडमै तरंग ल्याएको छ । उक्त तस्वीरमा अनुष्काले प्रियंकाको गला जोडले दबाएकी छिन । प्रियंका जिब्रो बाहिर निकालेर तड्पिएको जस्तो तस्वीरमा देखिन्छ । तर यो तस्वीर कुनै वास्तविक झगडाको हैन । यो मात्र रमाइलोको लागी अनुष्का र प्रियंकाले खिचाएको तस्वीर हो । उनीहरुले तस्वीरलाई सामजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन । उनीहरुले यसलाई क्याटफाइट भन्दै ठट्टा गरेका छन ।
अनुष्का र प्रियंका नयाँ फिल्म ‘दिल धडकने दो’ मा एकसाथ देखा पर्दैछन । उक्त फिल्म आउदो बर्ष जुन ५ मा रिलिज हुनेछ । फिल्ममा प्रियंका र अनुष्कासँगै रणवीर सिंह, फरहान अख्तर, अनिल कपुर लगायतको पनि अभिनय छ ।